Ndifuna ukwazi ukuba ndingayicima njani i-Instagram ▷ ➡️ Followers ▷ ➡️ yam
Ndifuna ukwazi ukuba ndiyicima njani i-Instagram yam
Epreli 28, 2021 0 IiCententarios 275
Kumatyeli amaninzi sijongana nesigqibo soku cima enye yeenethiwekhi zethu, Izizathu zahlukile, kwezinye kukungabikho kwexesha lokuyilawula, kwabanye kukungasetyenziswa kwayo, abanye bayadikwa yinethiwekhi yoluntu kunye nokuba inokuba negalelo njani kwabanye abasebenzisi bayo.
Kwi-Instagram kukho iindlela ezininziOkulandelayo, siza kukucacisela kuwe, ke uya kuba nalo lonke ulwazi oluyimfuneko ngaphambi kokuba uthathe isigqibo, siza kuchaza umahluko phakathi kwezi zinto zimbini kunye nento eyenzekayo emva kokuba wenze naziphi na kwezi zenzo. Ukuba ungomnye wabo bantu abasafuni ukuqhubeka nokuba yinxalenye ye-Instagram, apha siza kukuxelela ukuba ungayenza njani.
Kwimeko apho uthatha isigqibo shiya i-Instagram okwethutyana, Esinokukucebisa kukuba uyenze ngokungafakwanga okwethutyana.
Ngena kwiakhawunti yakho ye-Instagram.
Khangela kwaye ukhethe ukhetho lokukhipha iakhawunti kwaye yiyo loo nto.
Kule meko ithile, iakhawunti ayiyi kuphela Ukusuka kwiwebhu, kodwa awusayi kuphinda ukhethe ukukhetha ukungena kwiakhawunti yakho, iimpapasho zangaphambili ziya kuqhubeka nokufumaneka kubafowunelwa bakho, uya kufumana kuphela izimvo okanye imiyalezo.
Khubaza okwethutyana iakhawunti:
Kule meko kufuneka wenze inkqubo kwi-PC yakho, okanye ukusilela oko, kwisikhangeli seselfowuni.
Kufuneka Ngena ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Cofa kwindawo ehambelana ne umfanekiso weprofayile.
Oku kuya kukuphambukisa kukhetho lweprofayile, khetha "hlengahlengisa iprofayile yakho".
Ekupheleni kwephepha lesicelo unokufumana icandelo lokwenza iakhawunti isebenze okwethutyana, ukhethe.
Kuya kufuneka qinisekisa ukhetho lwakho ngekhowudi yakho yokufikelela.
Nje ukuba eli nyathelo lenziwe, awuyi kuphulukana nolwazi lweakhawunti yakho, kwaye kuya kufuneka ungene ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuze uphinde wenze iakhawunti. Unokwenza oku emva kweeyure ezingama-24, kuba lixesha eliqikelelwayo elithathayo kwinkqubo yokwenza isicelo.
Eli nyathelo lisisigxinaOko kukuthi, wakube ususile, awuyi kuba nakho ukufumana nayiphi na ingcaciso yeakhawunti, okanye uphinde usebenzise igama lomsebenzisi onalo, ayisiyiyo le okanye kwenye iakhawunti.
1 Ukukhupha iakhawunti:
2 Amanyathelo okulandela:
3 Khubaza okwethutyana iakhawunti:
5 Cima iakhawunti yakho unaphakade:
6 Amanyathelo okulandela:
Ndihlala njani kuFacebook?